Isiphithiphithi besikhona ivolumu kwaye iprofayile ephezulu, kodwa impendulo yam yokuqala yaba Ke? Bangaphi abantu abaziyo ukuba baneProfayile kaGoogle, kungasathethwa ke ukuba banokuhlela le profayile kwaye bahlengahlengise useto lwabo lwabucala kunye nokukhetha iintengiso? Khange ndikwazi ukuyifumana ngokukhawuleza nayiphi na idatha enobungqina, kodwa ithini ipesenti yabasebenzisi bewebhu abasebenzisa iplagi yeAdBlock Plus yeFirefox? Ngokuqinisekileyo ayonelanga ukuyibeka ngaphandle kokuphambuka okumiselweyo.
Inqaku lam elisisiseko kukuba kubaphathi bewebhu kunye nabathengisi, le ntshukumo inokuthengisa ngakumbi ukubhaliselwa Utyalo kwaye Iindidi zeWebhu njengabo abasemva kwekhethini bafuna ukufikelela kwidatha eninzi kangangoko kunokwenzeka. Kodwa oko kushukuma kunokuba yindlela yokuphendula edolweni kwingxaki engekabikho – kwaye ayinakuze ibekho.
tags: Uhlalutyoftci-google analyticsyonke intoPhuma kuyoprofileimidiya yokuncokola namhlanjei-venturepadwndebgu
Uhlalutyo lukaGoogle lukwimeko enqabileyo. Kwelinye icala, babodwa- banikezela ngesisombululo esidityanisiweyo se-Adsense kunye noHlalutyi kwimarike. Bamele banyanzeliswe ukuba badibanise kunye nawuphi na umboneleli wohlalutyo. Ngakolunye uhlangothi, abanako ukwenza ezinye zokudibanisa okukhulu (oko kukuthi i-Facebook Analytics yi-Webtrends) kuba bakhuphisana. Lo ubonakala usisidenge nje, nangona kunjalo.
Ndiyathemba ukuba i-Webtrends icinga ukuba kukwenza kwakho oku ukuze ufumane ibhonasi ye-helluva enye.
Ewe, uPat East eHanapin wayethetha nge-tweeting 'kutsha nje. Okokuqala i-Wave, emva koko i-Buzz, emva koko ukuxhaswa kweCaffeene, ngoku le?
Kufana nokuba bazama ukuzinqanda ekufumaneni imonopoly ngokonakalisa iimveliso zabo de ezinye zifumane.
Kulungile oku akulunganga, ngaphandle kokuba banendlela yokulandelela abantu usebenzisa ikhowudi yokuvala. 🙂
Kwimbono yethu yaseMelika yobumfihlo oku akunangqiqo, kodwa ukuze i-Google Analytics ibe nokuma okuhle kumazwe aseYurophu (aye abuza abathengisi be-analytics ngolu hlobo lokuphuma), uGoogle yinkokeli. Ukongezelela, olu tshintsho luvumela i-Google Analytics ukuba isetyenziswe kwiindawo zikarhulumente (njengoko ithobela izikhokelo zorhulumente wase-US zobumfihlo).
Cinga ngayo njengobunkokeli ngendlela eyahlukileyo. Inempembelelo kubathengisi, kodwa ndicinga ukuba ngokuhamba kwexesha, imimiselo yoorhulumente iya kubamba abathengisi be-analytics abanikezeli into efana nale ndlela yokuphuma.
Inqaku elinika umdla. Khange ndicinge ngeemarike zaseYurophu. Enkosi ngengqiqo.